Shirkadda Dahabshiil oo ka mid Noqotay Muslimiinta Ingiriiska ee lagu Abaalmariyo Horumarka ay Sameeyeen | Salaan Media
Home Wararka Shirkadda Dahabshiil oo ka mid Noqotay Muslimiinta Ingiriiska ee lagu Abaalmariyo Horumarka...
Shirkadda Dahabshiil oo ka mid Noqotay Muslimiinta Ingiriiska ee lagu Abaalmariyo Horumarka ay Sameeyeen
Abaalmarinahan oo ahayd tii 11-aad ee muslimiinta horumarka ka sameeyey dalka Ingiriiska, taas oo ah abaalmarinta ugu da’da wayn
London (The Muslim News)- Shirkadda Dahabshiil ayaa ku guulaysatay inay ka mid noqoto muslimiinta horumarka ballaadhan ka sameeyey dalka Ingiriiska oo la siiyo abaalmarin caalami ah oo ay ku mutaysteen waxtarkooda muuqda.
Abaalmarinahan oo ahayd tii 11-aad ee muslimiinta horumarka ka sameeyey dalka Ingiriiska, taas oo ah abaalmarinta ugu da’da wayn la xidhiidha muslimka Ingiriiska, ayaa munaasibad ballaadhan oo lagu qabtay Insiintii toddobaadkan ee 25-ka bishan March 2013 Aqalka Grosvenor ee magaalada London, taas oo dabbaaldegeeda ay goob-joog ahaayeen 500 qof, waxa lagaga dhawaaqay abaalmarinta cidda loo aqoonsaday muslimiinta ka qaybqaatay horumarinta bulshada dalka Britain oo ay ku jirto shirkadda Dahabshiil Group.
Abaalmarintaas oo la kala siiyey 16 qof oo kala matayey shirkado, hay’ado, ururro iyo shakhsiyaad mid walba dhinac gaar ah oo ka mid ah adeegyada bulshada horumar ka sameeyey, ayaa shirkadda Dahabshiil waxa lagu abaalmariyey dhinaca ganacsi oo ay hawlkarnimo iyo dadaal waxtar keenay ka muujisay.
Munaasibadda abaalmarintaasi oo ay ka qaybgaleen hoggaamiyayaasha axsaabta Ingiriiska iyo masuuliyiin ay ka mid yihiin Xoghayaha Caddaaladda Ingiriiska Mr. chris Grayling, Xoghayaha Maaliyadda ee qarsoonMr. Ed Balls, Xeer-ilaaliyaha Guud Mr. Dominic Grieve, ku-xigeenka Guddoomiyaha xisbiga Liberal-ka Mr. Simon Hughes iyo Xoghayaha qarsoon ee Caddaaladda Mr. Sadiq Khan, culimaa’udiin kala duwan, siyaasiyiin waddamo kala duwan oo aduunka ka socday iyo boqolaal dadweyne ah, waxa shirkadaha la abaalmariyey ka mid ah shirkaddaha Dahabshiil Group ku mutaysatay dadaalka ay ku gaadhay horumarinta ganacsiga ee uu hormoodka ka yahay Maareeyaheeda guud Mr. Cabdirashiid Maxamed Siciid.
Xoghayaha Caddaaladda Ingiriiska Mr. Chris Grayling oo isagu guddoominayey munaasibadda lagu abaalmarinayey muslimiinta ugu horeeya ee waxtar ku kordhiyey Ingiriiska, ayaa ammaanay muslimiinta ku guulaystay sannadkan oo uu ku tilmaamay inay horumar dalkiisa gaadhsiiyeen “Waxaan ku faraxsan nahay, sharafna ii ah inaan ka soo qeybgalo munaasibadda abaalmarinada Muslimiinta sannadkan, ee loogu dabaaldegayo dadka horumarka muuqda ku soo kordhiyey bulshadeena. Waa fursad qaali ah inaan qirno waxtarka muuqda ee dadkani sameeyeen,” ayuu yidhi Mr. Chris.
Ra’iisal-wasaaraha dalka Ingiriiska Mr. David Cameron oo fursad u waayey ka qaybgalka xafladdaasi ayaa fariin uu muuqaal cajalad ah ugu diray ku hambalyeeyey dadka abaalmarinada ku guulaystay, isagoo sheegay in dadka muslimiinta ahi kaalin wayn ka qaateen hore-u-socodka waddankiisa, waxaannu yidhi, “Waa sharaf inaan arko heerka horumarka iyo kalsoonida qeyb walba. Muslimiintu taageero weyn ayey Ingiriiska ka geystaan, hadday tahay dhinaca Diinta, ganacsiga, aqoonta, bulshada iyo dhinacyo kaloo tira badan.”
“Shaqsi kastoo la xulay wuxuu muujiyey dedaalkiisa, taasoo saamayn togan ku yeelanaysa horumarka guud ahaan Ingiriisku gaadhayo, rag iyo dumar, iyagoo ballaadhiyey qiimaha Islaamka ee nabadgelyada iyo wadajirka oo dhamaanteen ka faa’iidayno,” ayuu yidhi David Cameron.
Gudoomiayah xisbiga mucaaradka, Ed Miliband, ayaa isaguna fariin uu munaasibaddau soo diray ku hambaleeyey cid kasta oo qaybqaataday ama ku guulaystay abaalmarinaha 11-aad ee mulimiinta horumarka sameeyey oo uu ku tilmaamay mid heer sare maraysa.
“Waan ku faraxsanahay aragtida abaalmarinadan oo heerar sareysa gaadhaya. Waa qaab muuqda oo aan keliya lagu qirayn horumarka ay ka gaadheen ganacsiga, telnoolajiyada, balse si caam ah loo qiro kuwa wax-u-qabtay Muslimiinta iyo bulshada guud ahaan,” ayuu yidhi Mr. Ed Miliband.
Ku-xigeenka Ra’iisal-wasaaraha Ingiriiska, ahna Guddoomiyaha xisbiga Liberal Mr. Nick Clegg oo isna halkaas ka hadlay, waxa uu yidhi, “Dhamaan inta guulaysatay iyo kuwa la dooray waxay muujiyeen qisooyin ku dayasho mudan, keliyana, umay dhigin hadaf ku deyasho mudan bulshada Muslimiinta, balse guud ahaan bulshadeena Ingiriisk.”
Ugu dambayntii waxa munaasibaddaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey 16 qof ee ka socday shirkadaha, hay’adaha iyo shakhsiyaadka ee Muslimiinta horumarka sameeyey, iyadoo Xoghayaha qarsoon ee Maaliyadda Ingiriiska Hon, Ed. Balls halkaas ku guddoonsiiyey shirkadda Dahabshiil Group abaalmarin loogu magac-daray ‘Ummul Mu’min Khadijah’ oo ka turjumaysa horumarka shirkaddu samaysay ganacsiga.